Masjidyo iyo dugsi qur'aano badan oo albaabada la isugu dhuftay, Gobolada Dhexe. (Dhageyso Wareysi) - Caasimada Online
Home Warar Masjidyo iyo dugsi qur’aano badan oo albaabada la isugu dhuftay, Gobolada Dhexe....
Masjidyo iyo dugsi qur’aano badan oo albaabada la isugu dhuftay, Gobolada Dhexe. (Dhageyso Wareysi)
Waxaa dhawaanahaan soo baxayay warar sheegaya in Maamulka Ahlu sunada ee ka taliya gobolada dhexe gaar ahaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guri ceel ay bilaabeen inay xeraan masaajidyada ku yaalla deeganadaas.
Cali Sheekh Maxamuud waa Guddoomiyihii hore deegaanka Guri ceel waxaa uu sheegay in La xeray oo Al Baabada la isugu dhuftay Masaajido badan oo ku yiilay deegaanka Guri ceel iyo Dhuusamareeb.
Wuxuu intaas ku daray in labo masaajid oo ku yiilay Magalada Guriceel la xeray iyadoo sidoo kale la xeray dugsi quraan ku yiilay deeganadaas.
Labo masjid oo ku yiilay Guri ceel ayaa la xeray bilawgii bishan kuwaas oo haatan la sheegay in ay Al Baabada ay lahaayeen masajidyadaas laga furay oo haatan ay haawanayaan.
Sababta loo xiray masjidyada iyo dugsi qur’aanada ma cadda, hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in laga soo horjeedo caqiidooyin Ahlu-Sunna dhaliishay oo halkaas lagu baranayay.
“masaajidyo badan aya la xeray oo ku yaala dhuusamareeb iyo Guri ceel oo ay ugu dambeeyen labo masjid oo Guri ceel ku yiilay oo la xeray 5-ta bishan November ayuu yiri Cali Sheekh Maxamuud Gudoomiyihii hore Guri Ceel.
Maleeshiyaad ka tirsan Maamulka ka taliya Deeganada Guri ceel ayaa la sheegay inay dusha kaga xereeen inka badan 70 qofood oo ku dukanayay masaajidkaas.
Si kastaba ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka lagu eedeyay inay masaajidyadaas xereeen.